သနားခြင်းဂရုဏာတေနာ်စိတ်နှင့် ဝိညာဉ်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း | Real Conversion
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး၌ ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ် ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်သူမရှိပဲ ပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။” (ရှင်မဿဲ ၉း ၃၆)။
ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ဓဃသာစassငသညဓ ၊ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို “သူတပါး၏ ခံစားချက် ကို မျှဝေခံစားခြင်း၊ သနားကြင်နာခြင်း၊ သိမ်မွေ့ကြင်နာ၍ ချစ်ခင်သောစိတ်နှင့်ချစ်ခြင်း (ပြင်းထန်သော ခံစားမှု)ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ စပါကျန်ပြောကြားသည်တွင် ထိုဂရိစကားလုံးသည် မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော အချက်တစ်ချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ရှေးဂရိဘာသာလေ့လာရာ၌ မတွေ့နိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ ထိုဂရိစကားလုံးကို ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကုနှင့် ရှင်လုကာတို့က ဝေါဟာရ တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစကားလုံးကို ဂရိဘာသာစကား ဆီလျော်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးနှုန်းရာ၌လည်း မတွေ့ရပေ။ ဒါကြောင့် ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကုနှင့် ရှင်လုကာတို့က ဝေါဟာရအသစ် တစ်လုံးကို တီထွင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် ထိန်းသူမဲ့နေသော သိုးထိန်းမဲ့သိုးတို့ကို ကြည့်နေရင်းက သနားကြင်နာအားကြီးသောကြောင့် နှလုံးသားပေါက်ကွဲမတတ် ခံစားနေခြင်းကို ဖေါ်ပြနိုင်ဖို့ ဂရိဝေါဟာရအသစ်တို့ကို ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပင်ပန်းနေသောသူတို့ကို မြင်တော်မူ သောအခါ ကိုယ်တော်သည် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူခြင်းဖြစ်၏။ သင်သည်လည်း ခရစ်တော်ဘုရား၏ နှလုံးသားခံစားချက်အားလုံးကို သိနားလည်ပါက “ကိုယ်တော်သည် ပင်ပန်းနေသောသူတို့ကို မြင်တော် မူသော် သနားခြင်းဂရုဏာစိတ် ရှိတော်မူ၏” ဟူသော စာကြောင်းတစ်ကြောင်း စုစည်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ (C.H Spurgeon, "The compassion of Jesus, " The metropolitan Tabernacle pulpit, pilgrim publications, 1979 edition, volume LX. P 613; text matthew 9:36).
ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ဓခသာစassငသညဓ ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာ ကိစ္စအတွက် သုံးနှုန်းဖို့ ထိုစကားလုံးမရှိခြင်းဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ The Greco-Roman ၊ ဂရိ-ရောမခေတ်တုန်းက ထိုစကားလုံး၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ခံစားချက်အတိုင်း အသုံးပြုဖို့ စိတ်ခံစားမှု စကားလုံး မရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဂရုဏာမဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူမှုတိုး တက်ခြင်းက ကြီးစိုးနေသည့်အတွက် ထိုစကားလုံးကို အသုံးမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ထိုလူသားတို့အား “သနားခြင်းစိတ်မရှိသောသူတို့” ဟူ၍ ရောမ (၁း၃)၌ ထိုရောမမြို့သား တို့အား ပြောကြားခဲ့သည်။ သနားခြင်းစိတ်မရှိသောသူတို့ဟူ၍ ပထမရာစု ဂရိ-ရောမ ခေတ်၊ Greco – Roman ၊ လူတို့ကို ရှင်ပေါလုပြောကြားခြင်းကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဒေါက်တာချားစ်ဟုဒ် ပြောကြားသည်မှာ၊ “အမှောင်ထုကျရောက်ချိန်ကာလဟူသော ခေတ်ကို ပထမရာစု ဂရိ-လက်တင် စာရေးဆရာများက ထိုခေတ်သည် ထိုကဲ့သို့အမှောင်ထု ကျရောက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟု နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြခဲ့ ကြသည်။ ကျမ်းစာကို အနက်ဖွင့်ရေးသားသူတို့က တမန်တော်များ၊ ရောမ(၁)၌ဖေါ်ပြ ရေးသားသည် ထက်ပိုသော အကြောက် တရားများကို ပြုစုရေးသားကြသည်ဟူ၏” (Charle Hodge. Ph.D., A commentary on Romans, The Banner of Truth Trust, 1997 edition. P.43 note on Romans 1:29-31).
ဤနေရာ၌ မိတ်ဆွေတို့အား ဒီတရားဒေသနာအားဖြင့် ဂရုဏာမဲ့ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော ရောမလူတို့၏ အကြောင်းအရာဖြင့် အကျဉ်းချုံ့ပြီး ပြောပြပါရစေ။ ထိုသူတို့သည် အရက်သေစာ မူးယစ်ပျော်ပါးကြပြီး လူများရှေ့မှောက်တွင် ဓါးဖြင့်တိုက်ခိုက်အစွမ်းပြကြသည်။ ကလေးသူငယ်များ ကိုပင် ဝက်ဝံနှင့်ခြင်္သေ့အစာအဖြစ် ကျွေးကြ၏။ ပြောပြလိုပါသေး၏။ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော ရောမပြည်သူ^သားများသည် မိမိတို့မလိုလားသော မွေးကင်းစကလေးများအား အသေသတ်ဖို့ရန် ကွင်းပြင်၌၎င်း၊ တောထဲ၌၎င်း ပစ်ထားကြ၏။ ထိုသို့အားဖြင့် ရက်စက်စွာ ကလေးများကို ဖျောက်ပစ် ကြသည်။
သို့ပါသော်လည်း ခရစ်တော်ဘုရား ကြွဆင်းလာသောအခါတွင် အာရီနာ၌ ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်သော သူတို့၏နှိပ်စက်ခြင်းမှ သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ တောနက်ထဲ၌ ကလေးငယ်များ ပစ်ထားခဲ့ကြခဲ့ခြင်းသည် ထိုသူတို့၏ ရက်စက်သော တားဖျက်နည်းတစ်ခုဖြစ်၏။ တောထဲ၌ ငိုကြွေး နေရှာသော ကလေးငယ်များအား ရှာဖွေကယ်တင်ခဲ့သည်။ ပထမရာစု၊ ဂရိ-ရောမခေတ်တွင် ထိုကဲ့သို့သနားခြင်းဂရုဏာ စိတ်ထားဖြင့် ကယ်တင်ယူခြင်းက ထိုခေတ်အခါအတွက် အထူးအဆန်း တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအသစ်အဆန်းသော လုပ်ဆောင်မှုက လူထောင်ပေါင်းများစွာကို အသင်းတော် များ၌ ရောက်ရှိလာအောင် စွမ်းဆောင်မှုဖြစ်စေခဲ့၏။ ကနဦးအသင်းတော်ရှိ အသင်းသူ^ သူသားများ သည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဂရုဏာစိတ်ထားကို သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေပြု ကျမ်းထဲက အရေးပါသော အချက်နှစ်ချက်ကို ကောက်နုတ်တင်ပြပါရစေ ç
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိပဲ၊ ပစ်ထားသော သိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏ ။” (ရှင်မဿဲ ၉း၃၆)။
၁။	ပထမç အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးသည် ယေရှုခံစားသကဲ့သို့ စိတ်ခံစားမှု ရှိရပါမည်။
ကောင်းပြီလေ၊ “ယေရှုဟာ ယေရှုပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်က ယေရှုမှမဟုတ်ဘူးလေ”ဟု ပြောကောင်း ပြောပေလိမ့်မည်။ သင်သည် သခင်ယေရှုမဟုတ်မှန်း ကျွန်ုပ်သိတာပေါ့။ သို့ပါသော်လည်း၊ သင်သည် စစ်မှန်သော ပြောင်းလဲသူဖြစ်ပါက သခင်ယေရှုသည် သင့်အဖို့ စံပြဖြစ်နေသောကြောင့် ထိုအရှင် ယေရှုကို လိုချင်တောင့်တရပါမည်။ အကြောင်းမှာ “သခင်သည် သင့်အဖို့ ခြေတော်ကိုလိုက်လျှောက် စေခြင်းငှါ ပုံသက်သေကို ထားတော်မူပြီဟု (၁ပေ ၂း၂၁)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ပုံသက်သေဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ စံပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်ကြရပါမည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ စိတ်နေသဘောထား ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိရပါမည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောကြားသည်မှာ “ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘောကို သင်တို့၌လည်း ရှိစေကြလော့။(ဖိ-၂း၅) ၌ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုဘုရား စိတ်ခံစားသကဲ့သို့ အမှုတော်မြတ်၌ အပတ် တကုတ်ကြိုးစား၍ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ကြရပါမည်။
“အကြောင်းမူကာ ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူ မရှိပဲ၊ ပစ်ထားသော သိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။” (ရှင်မဿဲ ၁၄း၁၄)
သတင်းကောင်းကျမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သည့်အခါခါတွင် ခရစ်တော်ဘုရားသည် ဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးနေသူတို့အား သနားခြင်းဂရုဏာတော် သက်လျှက်အစဉ်ရှိ၏။
“ယေရှုသည် ထွက်ကြွ၍ လူများအပေါင်းတို့ကို တွေ့မြင်တော်မူလျှင် သနားခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍ လူနာရှိသမျှကို ချမ်းသာပေးတော်မူ၏” (ရှင်မဿဲ ၁၄း၁၄)
“ထိုအခါ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ ဤလူများကို ငါသနား၏။ သုံးရက် ပတ်လုံး ငါနှင့်အတူ ရှိကြပြီ။ စားစရာအလျှင်းမရှိ။ လမ်းခရီး၌ မောမည် ကိုစိုးရိမ် သောကြောင့် အစာမစားမှီ သူတို့ကို လွှတ်ခြင်းငှါ ငါအလိုမရှိဟု မိန့်တော်မူလျှင် (ရှင်မဿဲ ၁၅း၃၂)။
“ယေရှုသည် သနားခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍” (ရှင်မဿဲ ၂ဝး၃၄)။
“ယေရှုသည် သနားသောစိတ်ရှိသဖြင့်” (ရှင်မာကု ၁း၄)
¬”ယေရှုသည် ထွက်ကြွ၍ လူများအပေါင်းတို့ကို တွေးမြင်တော်မူလျှင် ထိုသူတို့သည် ထိန်းသူမရှိ၊ ပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြသည်ကို သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၍ (မာကု ၆း၃၄)
“ဤလူများကို ငါသနား၏ သုံးရက်ပတ်လုံး ငါနှင့်အတူရှိကြပြီ။ စားစရာအလျင်းမရှိ (ရှင်မာကု ၈း၂)။
“သခင်ဘုရားသည် ထိုမိန်းမကို မြင်လျှင် သနားခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍ မငိုနှင့်ဟု မိန့်တော်မူလျှက် (ရှင်လုကာ ၇း၁၃)။
ကျွန်ုပ်အသက် (၁၃)နှစ်အရွယ်တွင် ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေအရ ကျွန်တော်ချစ်သော မိခင်နှင့်အတူ ရှိနေဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ချေ။ ကျွန်ုပ်ဦးလေးက လိုလိုလားလားရှိပုံ မပေါ်သော်လည်း ဦးလေးအိမ်၌ နေဖြစ်သည်။ တကယ်အဟုတ်ပါပဲ။ ဦးလေးတို့အိမ်သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်လျှက် အချိန်ကုန်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ကျောင်းပြီးသောနောက် တစ်နေ့သောနေ့ခင်းဘက်၌ အိမ်နောက်ဖေး တံခါးဘက်သို့ဆင်းလျှက်၊ အိမ်အနောက်၌ရှိသော ဒေါက်တာနှင့်မစ္စစ်ဂိုဝင်တို့၏ သားတို့ နှင့်အတူ ဆော့ကစားဖြစ်၏။ နေဝင်သောအခါတွင် မိုက်နှင်အတူ သူတို့၏အိမ်ထဲသို့ ဝင်၍အတူတကွ တီဗွီကြည့်ဖြစ်ခဲ့၏။ မကြာခဏဆိုသလို ဒေါက်တာနှင့် မစ္စစ်မဂ်ဂိုဝင်က “ရောဘတ်ç ကျွန်တော်တို့ မိသားစုနှင့် ညစာအတူစားရအောင်လား၊ ဟုပြောလာခဲ့၏။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သူတို့နှင့် အတူ ညစာစားသောက်ခဲ့ကြ၏။ တစ်နေ့သောနေ့လည်ခင်းတွင် ဒေါက်တာနှင့် မစ္စစ်မဂ်ဂိုဝင်ကာ “ရောဘက်၊ ယနေ့ည ဝိညာဉ်နိုးကြားရေးဆုတောင်းအစည်းအဝေးသို့ လိုက်မှာလား၊ ဟုဆိုလာပါသည်။ “ဟုတ်ကဲ့” ဟု ကျွန်တော်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့၏။ ထိုသို့ဖြင့် ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဟန်တင် တန်းပက်စ်၊ ပထမနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ ညနေခင်း၌ အတူသွားခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနောက်တွင်၊ အပတ်တိုင်း တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်သို့ အမြဲသွားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်သစ် စိတ်သစ် ပြုပြင်ပြောင်းခြင်းမရှိသော်လည်း အသင်းတော် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ အစဉ်တစိုက် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်က ၎င်းအကြောင်းအရာများကို ပြောပြပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်၏ အကြောင်းကို မစ္စတာဂရိဖက်စ်ကို အကြောင်းစုံပြောပြခဲ့၏။ အကယ်၍သာ ဒေါက်တာနှင့် မစ္စစ်ဂိုဝင်တို့ဇနီးမောင်နှံက ညနေစာအတူစားဖို့ မဖိတ်ခဲ့ပါသည်။ “ရောဘတ်ရေ ယနေ့ည ဝိညာဉ်နိုးကြားရေး အစည်းအဝေးပွဲသို့ သွားကြစို့လား၊ ဟု ခေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်လည်း သင်းအုပ် ဆရာအဖြစ် (၅၇)နှစ်တိုင်တိုင် လုပ်ဆောင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘူး။” ဟူ၍ မစ္စတာဂရိဖက်စ်ကို ပြောကြား ခဲ့သည်။ မစ္စတာဂရိဖက်စ်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ မစ္စတာဂရိဖက်စ်ကလည်း မစ္စစ်နှင့် ဇနီးမောင်နှံက ထိုကဲ့သို့ ဆရာကို ပြောင်းလဲအောင် မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက ကျွန်တော်လည်း ဤနေရာမှာ ရောက်လာမည် မဟုတ်ဘူးလေ” ဟု ပြန်ပြောသည်။ ပြီးနောက် မစ္စတာဇေရွန်ကိုလည်း “မစ္စစ်မဂ်ဂိုဝင်က ထိုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမပေးပါက မည်သူမျှ ယခုလိုပါဝင်ရောက်ရှိလာကြမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟုပြောခဲ့သည်။ ဒေါက်တာနှင့်ဇနီးမဂ်ဂိုဝင်တို့သည် ထိုကဲ့သို့သနားခြင်း ဂရုဏာစိတ်မရှိပါက၊ အထီး ကျန်ဆန်နေ၍ (၁၃)နှစ်ခန့် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် လေလွင့်နေသော လူငယ်လေးကျွန်တော်သည် ယခုကဲ့သို့ ကြီးမားသောအသင်းတော်နှစ်ပါးကို ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ လူမြောက် များစွာကို ကယ်တင်ခြင်း ခံရစေဖို့၊ ဘာသာစကား (၁၄)ခုဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် အင်တာနက်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိပဲ၊ ပစ်ထားသော သိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။ “ (ရှင်မဿဲ ၉း၃၆)။
“ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်း သီဆို၏။
အမှုတော်ဆောင်များသည် ယေရ Iခံစားသကဲ့သို့ စိတ်ခံစားမှုရှိနေပါမည်။ ယေရှုဘုရားကဲ့သို့ သနားခြင်း ဂရုဏာတော်စိတ်မရှိပဲ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးရာတွင် အောင်မြင်ခြင်း နည်းပါးပါလိမ့်မည်။
၂။	ဒုတိယç အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက် ကြရပါမည်။
ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်သည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ သနားခြင်းသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ တပည့်တော်များနှင့်အတူ ယာကုပ်၏ရေတွင်းအနားသို့ ရောက်သောအခါ တပည့်တော်များအစာ ဝယ်ရန်သွားခိုက် ယေရှုသည် တစ်စုံတရာအမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တပည့်တော်တို့ ပြန်ရောက် လာကြသောအခါ ယုံကြည်သောရှမာရိလူ အမြောက်အများ ဝန်းရံလျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရကြသည်။ တပည့်တော်များက ယေရှုအား ခဏတာအနားယူလျှက် အစာသုံးဆောင်ရန် တောင်းပန်ကြ၏။ သခင်က အစာစားပြီးပြီဖြစ်ကြကြောင်း မိန့်တော်မူ၏။
“ယေရှုက ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်း၊ သူ၏အမှုတော်ကို ပြီးစီးခြင်းအမှုသည် ငါ့စားစရာဖြစ်၏။ ယခုမှစ၍ လေးလလွန်လျှင် စပါးရိတ်ရာကာလ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လော့။ ငါဆိုသည်ကား စပါးရိတ်ခြင်းအလို့ငှါ လယ်ပြင်တို့သည် ယခုပင် ၀င်းဝင်းရှိသည် မျှော်၍ကြည့်ကြလော့။ “ (ယောဟန် ၄း ၃၄-၃၅)။
ကျွန်ုပ်အသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်တွင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောကြားဖို့ ဘုရားသခင် ခေါ်ခြင်း ခံခဲ့သည်။ ဟိုင်တင်တန်ပက်ခ်၌ရှိ အသင်းတော်သို့ တရားဒေသနာတော် ဟောကြားဖို့ရန် ကျွန်ုပ်အား တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။ တရားဒေသနာတော်တို့ ဟောမြဲဟောကြားနေသော်လည်း ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ပျောက်ဆုံးနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဦးနှောက်အသိတရား အားဖြင့် ဝေငှနိုင်ခဲ့သော်လည်း ခရစ်တော်သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း အသေအချာမသိခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်အသက်တာ မပြောင်းလဲခင်ကတည်းက ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှရန် ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မိခင်ရှိရာ အီကိုပက်ခ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့သို့ ပြန်လာ ခဲ့ပါသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ဟုတ်ဆန်တေလာ နယ်မြေသစ်ပထမဆုံး သာသနာပြုသွားရောက် ခဲ့ခြင်းအကြောင်းစာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုသွားဖို့ကို စိတ်ပြင်းထန် စွာခံစားခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ လော့စ်အိန်ဂျက် လိတ်ffffမြို့၌ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၉နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ အသေအချာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ အရွယ်တူလူငယ်များ အသင်းတော်၌ အနည်းအကျဉ်းတက်ရောက်လာကြသည်။ ဒေါက်တာတိမောသေလင်း သင်းအုပ်ဆရာမဖြစ်ခင်၊ ၎င်းအသင်းတော်သည် လူဦးရေအနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ ထိုအသင်းတော်၌ရှိ လူငယ်စုံတွဲ မမ်ဖီနှင့် လော်နာလုန်တို့က ကျွန်ုပ်အား နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ မစ္စတာကီနီဝစ်ကာဆန်နှင့်အတူ ထိုလူငယ်စုံတွဲက ကျွန်ုပ်အား ညနေခင်းဝတ်ပြု အစီအစဉ်အပြီး၌ အပြင်စားသောက်ဆိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက် သူတို့အိမ်သို့ ကျွန်ုပ်အား ခေါ်ခဲကြ၏။ နွေရာသီနှောင်းတွင် ဘိုင်အိုလာကောလိပ် (အခုဆို တက္ကသိုလ်)သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ မမ်ဖီသည် တော်ဘုတ်ကျမ်းစာကျောင်း၌ သင်ကြားနေသူဖြစ်သည်။ ၁၉၆၁၊ စက်တင်ဘာ (၂၈)ရက်နေ့ မမ်ဖီလုန်၏ဘေးနားတွင် ထိုင်လျှက် နားထောင်ရင်း ကျွန်ုပ်အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရာစုနှစ်ဝက်နောက်ကြောင်းကို ပြန်တွေးကြည့်လျှင် မစ္စစ်လုန်၊ ဒေါက်တာနှင့်ဇနီးမဂ်ဂိုဝင်တို့၏ သနားခြင်းဂရုဏာတော်စိတ်နှင့် ကျွန်ုပ်အား ဂရုစိုက်ပြုစုခြင်းမရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်ယာန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာမည်မဟုတ်သလို သင်းအုပ်ဆရာလည်း ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ဟု ကိုယ်ကိုကို သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ရပါသည်။ ခရစ်တော်အဖို့ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည် အမှုတော်ဆောင် ဖြစ်လာဖို့ ထိုသူတို့က ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ် အသက်ရှင်လာသည့်အထိ ဂရုစိုက်ပြုစု၍ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် အတိအလင်းပြောကြားလိုသည်။ ထိုသူ (၄)ယောက်တို့က ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကို သိရှိလာဖို့ သွန်သင် ပဲ့ပြင်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းခံရသည့်အထိ ဂရုစိုက်ပြုစု၍ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် ကျွန်ုပ်အား “ခဏတဖြုတ်ဆုတောင်း” ပေးရုံသက်သက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ထိုထက်ပိုသော ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့အထိ ပြုစုခဲ့ကြသည်။ သူတို့က “ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို ဂရုစိုက် ခဲ့ကြ၏။ ပျောက်ဆုံးနေသော ဆယ်ကျော်သက် ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးအနိုင်ယူခဲ့ကြ၏။ ထိုအရာသည် lင်န – sအပူန ဘ၀နေနည်း၊ ဧဝံဂေလိ လုပ်ငန်းစဉ် မဟုတ်ဘူး လုံး၀မဟုတ်ဘူး၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပတ်တိုင်းပင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း နားထောင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်အား ကြင်နာယုယစွာဖြင့် ကူညီခဲ့ကြ ပါသည်။ အသင်းတော်၌ ရောက်လာကြသော လူငယ်လူရွယ်များအား ထိုသူတို့ပြုစုစောင့်ရှောက် သကဲ့သို့ သင်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိပဲ ပစ်ထားသော သိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။ “ (ရှင်မဿဲ ၉း၃၆)
“ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမူပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်။
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပင်ကိုသဘာ၀၌ ပျောက်ဆုံးလူသားများအား သနားခြင်း ဂရုဏာစိတ် ရှိပေသည်။ ထူးမြတ်သော ယစ်ပူဇော်ခြင်းတွင် မေတ္တာ အခံဓါတ်ဖြင့် အသေခံခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားကို အရည်ပျော်စေတော် မူပြီ။ သခင်၏ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခံခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ သစ္စာဖေါက်ခံရခြင်း၊ ချွေးသည် အသွေးကဲ့သို့ ကျသည့်အထိ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ကားတိုင်ထက်၌ ပြင်းထန်သောဝေဒနာခံစားရခြင်းများသည် သနားခြင်း ဂရုဏာ တော်စိတ် နှလုံးသားနှင့်ရင်းပြီး လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်၍ ကြီးမားသော ကျေးဇူး မေတ္တာ၊ သန့်ရှင်းသောအသက်တာဖြင့် သေခြင်းတိုင်အောင် အပ်နှံခြင်းများက စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူဖြစ်လာဖို့ နှိုးဆော်ပေး၏။ ကျွန်ုပ်မကြာခဏ ကြားရသော အပြစ်သားတို့၏ စကားသံကား၊ “အသင်းတော်၌ အယူလွဲမှားသော သူတို့ မြောက်များစွာရှိ၏” ဟူ၍ ပြောဆိုလေ့ရှိကြသည်။ သူတို့တတွေ၏အပြော မှန်သည်ဟုပြောဆိုဖို့ စိုးရွံ့မိသည်။ အသင်းတော်၌ အယူလွဲမှားသောသူ မြောက်များစွာရှိနေသည်ကို သံသယရှိစရာမလိုပါ။ တပည့်တော် (၁၂)ယောက် ထဲက တစ်ယောက်သည်လည်း သစ္စာဖေါက်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား၊ ခရစ်ယာန်များ ကို လွှဲမှားသော အယူဝါဒီသမားများဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းခံကို သင်သိပါ သလား။ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသောသူတို့သည် အပြစ်သားများတို့အား ရွေးနုတ် ကယ်တင်ခဲ့သော ကြီးမားသော ခရစ်တော်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို နားမလည်သော ကြောင့်ဖြစ်မည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် အားလုံးအတွက် ဖြစ်သလို၊ မယုံကြည် သူတို့သည် အပြစ်၌တူညီနေသည်ကို နားလည်ခြင်းမရှိ သောကြောင့် ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သာမန်လူသားများပင်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ အမှန်တကယ် တည်ရှိခြင်း၊ မီးငရဲလည်း အရံသင့်တည်ရှိနေခြင်း၊ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းနှင့် အပြစ်သားများအား မီးငရဲသို့ကျရောက်စေခြင်းစသော ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်း၌ ခရစ်တော်သင်ကြားပေးခဲ့သော ကျေးဇူးတရား ထဲက၎င်းအကြောင်းအရာများ ပါဝင်နေခြင်းကို သိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါ သည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူတို့သည၊် မိမိတို့သည် အပြစ်သား ဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်၏အဖိုးအခ သေခြင်းငရဲဖျက်ဆီးခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် ပြစ်ဒဏ်ပေးဆပ်ရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မည်။ The Golden Path of Successful Personal Soul Winning , Sword of the Lord Publishers, 1961, PP. 123, 124, 125).
သနားကြင်နာသော မျက်စိရှိလျှက် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကို ရှာဖွေနေသောသူကို လောကီလူသားများက ထိုသူကို အယူလွဲမှားသောသူဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းလည်း မထူးဆန်းပေ။ အကြောင်းမှာ “ထိုသူတို့သည် တစ်ခြားသောသူများကိုလည်း ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ ဖြစ်လာ အောင် လုပ်ဆောင်သောကြောင့်” ဖြစ်သည်။ ထိုလောကီလူသား တို့က ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ၊ မေတ္တာဂရုဏာကို ရှေ့ရှုလျှက် လောကီလူသားများကို အပတ်တိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းသို့ လာရောက်နိုင်ရန် ချဉ်းကပ်နေခြင်းကို ဖျက်ဆီးကြစို့ဟု သူတို့တစ်တွေ စဉ်းစားနေ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသည်လည်း ထိုသို့သောအမှုတော်မြတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ သင့်ကိုသင် ဆက်ကပ်ထားပါက တရားပလ္လင်သို့ ကြွလာပြီး ဒူးထောက်နေလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံ ကောင်းကြီးတောင်းခံ ဆုတောင်းပေးပါမည်။ ဘုရားရှင်က သင့်အား မေတ္တာဂရုဏာ စိတ်ထားရှိလျှက် ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်များ (လူငယ်များ) ဘုရားကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင် လာနိုင်ရန် ကောင်းကြီးပေးပါမည်။ (ဆုတောင်းကြပါစို့)၊ “ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါ” ဟူသော သီချင်းသီဆိုစဉ် သင်တို့နေရာသို့ သွားနိုင်ပါပြီ.
လမ်းမှားနေဆဲဖြစ်သော မိတ်ဆွေတို့အထဲက အချို့သောသူတို့အဖို့ စကားအနည်းငယ် မပြောကြားပဲ ဤဒေသနာတော်ကို အဆုံးမသတ်လိုသေးပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန်fYတော် မူသည်ကား “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်။ ထာ၀ရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော် ကို စွန့်တော်မူ၏” (ရှင်ယောဟန် ၃း၁၆)။ ဤသည် အကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်၏။ အပြစ်မှ သင့်အသက်တာပြောင်းလဲလာပြီး ခရစ်တော်သခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရန် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် သည် အဖခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ ထိုင်တော်မူပြီ။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သခင့် ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သခင့်အသွေးတော်နှင့် သင့်အပြစ်များကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး သင့်အားထာ၀ရအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မသဲ ၉း၃၅-၃၈ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
( ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက် ၁၈၉၅ -၁၉၈၀) ခုနှစ်၌ သီးကုံသော “အကျွန်ုပ်ရှိသည်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ကျူးဧပေးပါသည်။
''Soul Winning Compassion''
“အကြောင်းမူကား ၊ ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိပဲ၊ ပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။ (ရှင်မဿဲ ၉း၃၆)။
၁။	ပထယမ ç အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးသည် ယေရှုခံစားသကဲ့သို့ စိတ်ခံစားမှု ရှိရပါမည်။ ၁ပေ ၂း၂၁၊ ဇိလိ ၂း၅၊ ရှင်မဿဲ ၁၄း၁၄၊ ၁၅း၃၂၊ ၂ဝး၃၄ç ရှင်မာကု ၁း၄၁၊ ၆း၃၄၊ ၈း၂၊ ရှင်လုကာ ၇း၁၃၊
၂။	ဒုတိယç အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက် ရပါမည်။ ရှင်ယောဟန် ၄း၃၄ - ၃၅ယ ၃း၁၆၊